Van Gaal oo sharaxaad ka bixiyay sababta Frenkie de Jong uu wali ula qabsan la’ayahay kooxda Barcelona – Gool FM
Van Gaal oo sharaxaad ka bixiyay sababta Frenkie de Jong uu wali ula qabsan la’ayahay kooxda Barcelona
(Barcelona) 04 Sebt 2019. Tababaraha reer Holland ee Louis van Gaal ayaa falaqeeyay xaalada da’ayarka ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong ayaa ku yimid kooxda Barcelona heshiis ku kacay qiyaastii qiimo dhan 75 milyan euro, iyo 11 milyan euro ee ha lacagta kala wareejinta heshiiska, isagoo saxiixay heshiis 5 sano ku sii heyn doona garoonka Camp Nou.
Laakiin sida ay u muuqato Frenkie de Jong ayaan wali sameynin bandhigii laga doonayay inuu ka sameeyo kooxda Barcelona, inkastoo dhawaan loo caleemo saaray laacibkii khadka dhexe ugu fiicanaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Haddaba tababaraha reer Holland ee Louis van Gaal oo ka hadlayay qaab ciyaareedka Frenkie de Jong kaddib imaatinkiisa kooxda Barcelona, kaddib wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain.
“Barcelona si fiican uma isticmaasho tayada Frenkie de Jong, arrinta waxay ku saabsan tahay la qabsigiisa”.
“Waxay arrintan ka siman yihiin Matthijs de Ligt, waa dhaqan iyo qaabab kale ee kala duwan”.
“Qaabka loo ciyaaro kubadda cagta gudaha Talyaaniga wuu ka duwan yahay Netherlands, dadku waxay moodayaan inay fududahay laakiin ma ahan wax fudud”.
Juventus oo ku dhawaaqday liiska xiddigaha kaga qeyb galaya kulamada Champions League xili ciyaareedkan… (Yaa Ka Maqan Yaase Ku Soo Baxay?)
Dani Carvajal oo ka hadlay olalaha la doonayo in markale lagu xoojiyo kooxda Real Madrid